Semalt: Crawlers DIY noma Scrapers ukuthola idatha kusuka Amawebhusayithi Ecommerce
amawebhusayithi, izitolo ze-intanethi, amawebhusayithi e-social media noma ezinye izikhangiso ezifanayo. Ngezinye izikhathi ungathola idatha kusuka e-commerce e-site efana ne-Amazon ne-eBay ngesandla, kepha idatha enjalo ingaba engalungile futhi engahleliwe. Ngakho-ke, njalo udinga ukusebenzisa abakwa-DIY noma ama-scrapers ukukhipha idatha, ukuqapha nokugcina ikhwalithi yayo.
I-Tabula ingenye yezingcweti ze-DIY ezinamandla kunazo zonke - computadoras analogas. Ingafaka amafayili akho e-PDF futhi inhle kumawebhusayithi e-commerce. Kumele nje ugcizelele idatha bese uvumela i-Tabula ikufake. Ithembisa ukunikeza idatha enembile ngokuvumelana nezidingo zakho kanye nokulindela. Kanye efakwe futhi ivuselelwe, i-Tabula izokhipha idatha kuma-Amazon naku-eBay ngaphandle kwenkinga.
Akuyona nje kuphela i-web crawler kodwa futhi uhlelo olubanzi nolusizo lwedatha yedatha. Le thuluzi le-DIY likuvumela ukuba uqoqe idatha kwifomu ehleliwe neyaziwa kahle. Asikho isidingo sokukhathazeka ngekhwalithi yayo njenge-OpenRefine izokunikeza izakhiwo zedatha yezinga eliphezulu.
Isi-Scraperwiki siwusizo owusizo we-diy and scraper osiza ukukhipha idatha kuwo wonke amawebhusayithi amakhulu. Ikhuthaza abahleli nabathuthukisi ukuthi basebenzise ulwazi lwe-intanethi bese beyiyisa kudathasethi evumelekile. I-Scraperwiki ayidingi ukuba ufunde noma yiluphi ulimi lohlelo olufana ne-Python, i-PHP, ne-Ruby.
Kunenombolo enkulu yabakwa-DIY crawler kanye ne-data scrapers kwi-intanethi, kodwa ama-Semantics3 uhlelo olusha. Uma ufuna ukuthola ulwazi lwe-Amazon ehlukile noma imikhiqizo yase-eBay ngaphandle kokuyekethisa ngekhwalithi, kumele usebenzise leli thuluzi. Ukulanda nokulifaka ngeke kuthathe isikhathi esiningi. Ama-Semantics3 athola ukuthandwa ezinyangeni ezimbalwa nje kuphela, futhi i-database yayo ibhekwa njengenye yezinto ezinhle kakhulu futhi ezinokwethenjelwa. Igcina izithombe, amanani, izincazelo zemikhiqizo kanye nolunye ulwazi kuwe kusuka kubathengisi abafana ne-Walmart, eBay, ne-Amazon. Ngaphezu kwalokho, leli thuluzi lithatha i-real-time lookups kubasebenzisi futhi iphakamisa okulindelweyo.
Iningi liyisicelo sokuhlunga ifu elihle kakhulu kumawebhusayithi e-commerce nokuhamba. Kulula ukusetha futhi ingahlanganiswa ne-Google Chrome. Amawebhusayithi afana ne-eBay ne-Amazon angasuswa phakathi kwamaminithi besebenzisa lolu hlelo olunzulu lwe-DIY. Ungathola imininingwane yomkhiqizo, ulwazi lwamasheya, namanani.